Looks Nepal माधव पक्षीय अनेरास्ववियुकाे कोभिड नियन्त्रण बिशेष अभियान – Looks Nepal
May, 5, 2021	looksnepal
बनेपा । अनेरास्ववियु काभ्रेले अति विपन्न परिवारलाई जिल्ला भरी राहत बाढ्ने तयारी थालिसकेको छ । जिल्लामा लकडाउन भए संगै केही श्रमजीवी परिवारको घरमा खाद्यान्न समेत नहुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यश कार्य थालिएको अनेरास्ववियुका अध्यक्ष बदन भण्डारीले जानकारी दिनु भयो ।
यश अगाडिको लकडाउनमा विभिन्न राजनितिक दल र भात्री संघसंगठनले आफू निकटका व्यक्तिलाई मत्रै राहत दिएको गुनासो पनि धेरै सुनिन्थ्यो । राजनितिक आस्था भन्दा फरक खालको अवस्था रहेकोमा राहत वितरणमा राजनितिक सोच नराख्ने प्रतिबद्धता समेत अनेरास्ववियु काभ्रेले जनाएको छ ।
राहत वितरण साथै मास्क तथा सेनिटाइजरहरु प्रहरी लगाएत अवश्यक व्यक्तित्वलाई दिने तयारी समेत भैसकेको छ । जसका लागि सहयोगी दाताहरुबाट सहयोग संकलन गरिएको छ । अभियानमा अध्यक्ष बदन भण्डारीले ५००० माक्स सहयोग गर्ने, युवा व्यवसायी तथा समाजसेवी युवराज श्रेष्ठले ५००० माक्स, युवा संघ नेपालका स्थाई कमिटी सदस्य समीप त्रिपाठीबाट २० थान बाफ लिने मेसिन (3in 1 Vaporizer ), युवा व्यवसायी एबम समाजसेवी केबी पौडेलबाट १० थान बाफ लिने मेसिन (3in 1 Vaporizer ) सहयोग, Lions Club Of Kathmandu Lord Buddha का President (2021/2022) राम श्रेष्ठबाट 50ml को Sanitizer २०० पिस सहयोग, Lions Club Of Kathmandu Lord Buddha का President लक्ष्मीप्रसाद कटेलबाट रु. २०००/- आर्थिक सहयोग, भुम्लु गाउँपालिका उपाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठबाट रु. २००००/- आर्थिक सहयोग,
युवा व्यवसायी एबम समाजसेवी मानध्वज योन्जनबाट १००० पिस माक्स र १०० पिस साबुन सहयोग, व्यवसायी एबम समाजसेवी लेखनाथ श्रेष्ठबाट रु. १०,०००/- आर्थिक सहयोग, युवा व्यवसायी एबम समाजसेवी शशी कुमार भण्डारीबाट १० लि. Sanitizer र १०० पिस Life Boy साबुन सहयोग, अनेरास्ववियु काभ्रेका जिल्ला कमिटी सदस्य उमेश धितालबाट २००० /- आर्थिक सहयोग, युवा व्यवसायी तथा समाजसेवि महेश कुवरबाट २०००० /- आर्थिक सहयोग, सेती देवि मावीका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बिनोद कुवरबाट ५००० आर्थिक सहयोग, युवा व्यवसायी तथा समाजसेवी हरि अधिकारी बाट ५००० आर्थिक सहयोग, युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य सहदेभ भण्डारीबाट ५००० /- आर्थिक सहयोग, युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य पुरुषोत्तम आचार्याबाट ३००० /- आर्थिक सहयोग, नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य प्राननाथ न्यौपानेबाट २००० /- आर्थिक सहयोग संकलन भएको छ । साथै सन्कलन गर्ने कार्य जारी रहेको र सहयोगी हातहरुले सहयोग गर्न समेत अपिल गरिएको छ ।